ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ: ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့တကွ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသို့ စေတနာရှေ့ထား အကြံပြုချက်
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ၊ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့တကွ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသို့ စေတနာရှေ့ထား အကြံပြုချက်
(ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးဟောင်း ဦးသန်းရွှေနဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းများ၊
သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်နဲ့တကွ ကြံ့ဖွံ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသို့
ဒီကနေ့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ ပြဿနာပေါင်းစုံရဲ့ အဓိက ဇာစ်မြစ်ကတော့ ကန့်လန့်ကာ နောက်ကွယ်ကို ၀င်သွားတဲ့ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ အကြောက်လွန်နေတဲ့ကိစ္စလို့ မြင်ပါတယ်။ အကြောက်လွန်နေတဲ့အတွက် စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေအနေနဲ့ သူတို့ဆီ နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်လာနိုင်တဲ့ ပြဿနာလို့ ထင်ရင် လက်မဲကြီးတွေ ဦးအောင် ထွက်ထွက်လာပြီး ဖမ်းဟဲ့ ဆီးဟဲ့ နှိမ်နင်းဟဲ့ သတ်ဖြတ်ဟဲ့ ဆိုတာမျိုးတွေ လုပ်နေတာလို့ ထင်ပါတယ်။
အဲဒီအကြောက်လွန်နေတဲ့ကိစ္စကို လက်ပံတောင်းတောင် သပိတ်စခန်းတွေ ဖြိုခွဲပုံဖြိုခွဲနည်းအတိုင်း ဆက်ဖြေရှင်းနေမယ်ဆိုရင် ပြဿနာတွေ၊ ပဋိပက္ခတွေဟာ ဘယ်တော့မှကို ဆုံးနိုင်တော့မှာ မဟုတ်ဘဲ ပိုပိုများလာမှာသာ အသေအချာပါ။ ပြဿနာတွေကြားမှာ အရင်ဆုံး အထိနာတာ ပြည်သူတွေဖြစ်ပေမယ့် မခံနိုင်တဲ့ အဆုံးတနေ့မှာ ပြည်သူတွေရဲ့ ဒဏ်ခတ်မှုကို မလွဲမသွေ ခံစားရမှာကတော့ စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဟောင်းတွေကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေအနေနဲ့ ကံကောင်းထောက်မပြီး စောစော ကွယ်လွန်သွားခဲ့ရင်လည်း သူတို့ရဲ့ဆွေစဉ်မျိုးဆက်တွေကတော့ မလွဲမသွေ ဒဏ်ခတ်ခံကြရမှာပါ။
သေချာပါတယ်။ ဒီနေ့ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာတွေကို ရုပ်သေးသမ္မတ ဦးသိန်းစိန်လည်း ဘယ်နည်းနဲ့မှ ရှင်းနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ အတုအယောင် လွှတ်တော်မှာလည်း အဖြေရှာနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဘယ်လို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မတီမျိုးကမှလည်း အဖြေထွက်အောင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်မှာ/ စစ်ဆေးရဲမှာ မဟုတ်ပါဘူး။
အဲဒီတော့ ပြည်သူလည်း မနာ၊ သူတို့လည်း မနာချင်ဘူးဆိုရင် လုပ်စရာနည်းက အဓိကအားဖြင့် စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေဘက်က စတင်လုပ်ဆောင်ရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေအတွက် နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူခံရမှာကို အကြောက်လွန်နေတဲ့ကိစ္စအတွက် စိတ်ချရမယ့်၊ မတော်မတရားလည်း မဖြစ်မယ့် ကတိက၀တ်တွေကို ပြည်သူအပေါ် သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားတဲ့ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အကြေအလည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ထွက်ပေါက်ယူဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲလိုမှမဟုတ်ဘဲ အခုဖြေရှင်းပုံဖြေရှင်းနည်းတွေအတိုင်းပဲ ဆက်လုပ်ပြီး အာဏာတည်မြဲအောင် နောက်ကွယ်ကနေ နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ကလိန်ကကျစ်အလုပ်တွေ လုပ်နေဦးမယ်ဆိုရင် နောက်တနည်းကို ပြည်သူဘက်က မလွဲမသွေ လုပ်ဆောင်လာစရာပဲ ရှိပါတော့တယ်။ အဲဒါကတော့ စစ်အာဏာရှင် အကြွင်းမဲ့ ဖြုတ်ချရေး လူထုတိုက်ပွဲနဲ့ ရင်ဆိုင်ရဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီနည်းနှစ်နည်းထဲက တနည်းနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းပြီးသွားတဲ့အခါကျမှသာ ဒီကနေ့ ဖြစ်နေတဲ့ ပြဿနာအ၀၀ ဆုံးခန်းတိုင်သွားပြီး မြန်မာပြည်ဟာ ဒီမိုကရေစီစနစ်ဆီကို အားကောင်းမောင်းသန်း လျှောက်လှမ်းလို့ ရနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေအနေနဲ့ ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းတဲ့ ပထမနည်းနဲ့ ဖြေရှင်းမယ်ဆိုရင်တော့ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေလည်း မနာ၊ ပြည်သူလည်း မနာဘဲ အေးအေးချမ်းချမ်း ပြီးနိုင်တာပေါ့ခင်ဗျာ။ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေ လေးလေးနက်နက် စဉ်းစားကြည့်ဖို့ အကြံပြုရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
အရပ်စကားနဲ့ ပြောရရင်တော့ “ဦးလေးတို့လည်း နာမည်ပျက်ပေါင်း များလှပြီ၊ သေခါနီးလေး အဖတ်ဆည်နိုင်သလောက် ဆည်သွားကြစေချင်ပါတယ်။ နိုင်ငံနဲ့ ပြည်သူလည်း ဦးလေးတို့ နှိပ်စက်ခဲ့တာ ဖွတ်ဖွတ်ညက်ညက် ကြေနေပါပြီ။ ဘယ်သူ့အတွက်မှ အကျိုးမရှိပါဘူးဗျာ” လို့ပဲ မေတ္တာရပ်ခံချင်တော့တာပါပဲ။
နံနက် ၂း၅၁ နာရီ
Posted by ဒေါက်တာလွဏ်းဆွေ at 2:45 AM
You right Dr. Lun Swe.The main person is stupid Than Shwe.
The best idea and suggestion for our peoples.
But Than Shwe and his fellowships were can not do that.They still have to keeping power
till they die.Then they have to hand over next generations.They switched four time already
from Ne Win to Thein Sein.
ma har said...
ဒေါက်ချာ လွန်းဆွေ ကိုဆေးအမြန် ကုပေးကြပါ
အောင်အသုံးချတတ်ရင်ချမချတတ်ရင် ကဒါဖီလို တသက်
saw kt oo..ဘာကိုဆိုလိုပြီးရေးထားတယ်ဆိုတာခ
စစ်အုပ်ချုပ်ရေးမှ ဆင်းသက်လာတဲ့ သမတ ကို မကြိုက်လို့ အမျိုးမျိုးဝေဖန်နေတဲ့ လူအများစု့ဟာ တကယ်တော့ ဘာမှအရည်အချင်ရှိတဲ့သူတွေမဟုတ်ဘူး မယုံရင် ထောက်ပံ့မှု့တွေကို ဖြတ်တောက်လိုက်ကြည့် တစ်လအတွင်း ငတ်မသေရင် ပြောချင်တာပြော စစ်သားဟာ စစ်တန်းလျှားမှာဘဲ နေရမယ်ဆိုရင် ထောင်ထွက်ဟာလည်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေး စခန်းမှာဘဲနေသင့်တယ်
ks times said...
ပေါပေါများများ ပေးနိုင်တာက ထင်မြင်ချက်တို့ ဝေဖန်ရေး တို့ပေါ့ ငါလဲပေး တတ်တယ် လုပ်မနေနဲ့ မင်းကိုနိုင်တို့ လူလိမ် အောင်ဆန်းသမီးစုကြည် မင်းတို့လဲ အားလုံး ဗမာ တွေဘဲဆိုတာ ငါတို့ သတိမထားမိဘူး မထင်နဲ့
လည်း ဝ တပ်ဖွဲ့ကိုကျပ်ငွေသိန်းသုံးသောင်းလားထောက်
dragon knight said...
ဟေ့ကောင် ကျော်နိုင် မင်းအုပ်ချူပ်ရေး ကြောင်းဘယ်လောက်သိလို့ စောက် ရမ်းပြောနေတာလဲ ဘုန်းကြီးက ဘုန်းကြီးအလုပ်မဟုတ်တာလုပ်မှ အထုခံရ တော့မှာပေါ့
I would suggest you to post English version of this article and also send to Puppet Ban Kee Moon and Obama.
Although they know the true situations in Burma, they pretend not to know all and supporting the lies.
Naing Win said...
ma har ဒေါက်တာလဏ်းဆွေကအရူးတွေကိုကုတဲ့ဒေါက်တာလေအရူးကိုကု၇င်းသူပါရူးနေပြီ
"ပြဿနာတွေအတွက် နောက်ကြောင်းပြန် အရေးယူခံရမှာကို အကြောက်လွန်နေတဲ့ကိစ္စအတွက် စိတ်ချရမယ့်၊ မတော်မတရားလည်း မဖြစ်မယ့် ကတိက၀တ်တွေကို ပြည်သူအပေါ် သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားတဲ့ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ အကြေအလည် ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းပြီး ထွက်ပေါက်ယူဖို့ပဲ"
ပြည်သူအပေါ် သြဇာတိက္ကမ ကြီးမားတဲ့ ဒီမိုခေါင်းဆောင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေ
comment bend လုပ်လိုက်ပြီ။
မင်းလဲသဘောပဲနော်-bend ချင် bend
you right. Dr. Lun Swe. we are so late in the world and so poor in everything. when and how we have peace .....
u r right.Dr.Lun Swe. i like it.
ကဲပါ ... ငါပဲခေါင်းဆောင်လုပ်မယ်
တိုင်းရင်းသားတွေအတွက်ရော ဆင်းရဲနေတဲ့နိုင်ငံအတွက် ရော
thiha kyawswa said...